Haweenka Puntland oo dalbanaya in ay helaan doorkooda siyaasadda ee xukuumada cusub (Dhegeyso) – Radio Daljir
Haweenka Puntland oo dalbanaya in ay helaan doorkooda siyaasadda ee xukuumada cusub (Dhegeyso)
Nofeembar 3, 2013 4:57 b 0
Garoowe, November 3, ?2013 – Ololaha ay wadaan ururrada haweenka ee Puntland ayaa weli socda, iyagoo baadi goob ugu jira in ay door muuqda ku yeeshaan baarlamanka cusub ee dhowaan imanaya, maalmahan waxaa garoowe ka socda kulamo la xiriira howlahaas.
Wasaaradda haweenka ee Puntland ayaa maanta soo saartay baaq ay xukuumada iyo isimada Puntland kaga codsanayso in haweenku ay door muuqda ku yeeshaan xilibaanada la soo xulayo iyo weliba xafiisyada gollaha xukuumada cusub.
War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda haweenka ee Puntland ayaa lagu sheegay in haweenka Puntland in ay diyaar u yihiin in ay kaalintooda helaan.
Wasiir ku xigeenka wasaarada haweenka ee Puntland Caasho Axmed Maxamuud ayaa sheegtay in ay haweenku yeesheen shirar kala duwan, kuwaas oo ay ku muujinayaan sida ay diyaar ugu yihiin hamigooda siyaasadeed iyo kordhinta tirada kuraasta ay ku leeyihiin wakiilada.
Gobollada Puntland ayaa laga dareemaya kacdoonka ay dumarku wadaan ee la xiriira doorkooda siyaasada oo ka duwan sidii hore.
Dhegeyso: wasiir ku xigeenka haweenka ee Puntland Caasho Axmed Maxamuud oo hadlaysa
Marwo Fowsiyo ?xubnaha joogtada ah ee QM waxaan u sheegnay in la taageero ciidankeenna?
Garsoorayaal Soomaali ah oo Kenya iyo jabuuti uga qayb-galaya shirka garsoorka iyo Burcad-badeeda